Taona roa voalohany no mba hendry
Enin-taona tamin’ity 2014 ity no nanambadiako ka ireo taona roa voalohany niarahanay irery ihany no mba nisy hamamiana sy niainana filaminana marina. Vetivety ihany mantsy dia niofo ny fifankatiavanay fa nampiseho ny toetra ratsiny amin’izay ny vadiko. Lahitokana ny zanakay ary efa-taona lasa izahay mivady no nikasa ny hiteraka ny zandriny amin’izay. Tsy nety nahazo zaza intsony anefa aho nanomboka teo ka tsy vitan’ny nanaratsy ny fifandraisanay izany fa vao mainka ihany koa namporisika ny vadiko nampirafy ahy.
Adalam-behivavy sy be namana izy
Mpitantana orinasa izy, mbola tanora dia efa nitana izany andraikitra izany ary nahita fahombiazana hatrany . Tovovavy maro no nitsiriritra azy, izy rahateo tia mihaingo sy jejojejo. Ny anay mivady kosa fitiavana nitsiry teny amin’ny sekoly ambony . Bevohoka roa volana ny zanakay voalohany aho no niroso tamin’ny fanambadiana izahay roa kely. Efa nalaza ho tia fiainana sy tsy matotra izy tamin’izany ka tsy nino ny rehetra hoe hanambady marina izy. Nanova azy anefa ny fitondrako vohoka ka nijoro ho lehilahy sy raim-pianakaviana mendrika izy nanomboka teo ary nikarakara fatratra anay mianaka. Nandalo ihany anefa izany fiovany tsara izany fa tsy feno roa taona akory taty aoriana dia efa niverina tamin’ny fanaony taloha izy fa lasa nanasa ireo namany tao an-trano isaky ny faran’ny herinandro ary revy lava no nanjaka tao an-tokantranonay. Nanjary nahasosotra ahy anefa ny nahita azy nampiseho toetra ratsy sy ditra ny zanakay ka noteneniko mafy izy mahakasika io fampidirana toaka sy sigara miampy fiteny maloto ao an-tokantranonay io. Nanaraka tokoa izy saingy nisy ambadika izany.
Nivoaka lava sy nody alina
Rehefa tsy navela nisotro tao an-trano izy dia nanjary nivoaka lava sy nody alina. Raha niezaka niteny azy mahakasika izany aho dia omeny tsiny hatrany, lazainy fa nandroaka azy tsy hisotro ao an-tranony ary manapatapaka amin’ny toerany . Niitatra anefa izany kilemany izany ka tsy vitan’ny alim-pody intsony fa tsy nody mihitsy. Nanjary toy ny hotely ny tokantranoko ka toerana fidiovana , fisoloana akanjo sy fisakafoanana ary fakana aina sisa. Rehefa te-hody izy dia mody ary rehefa voatazon’ny vehivaviny any dia tsy mahalala mampilaza akory ka izaho no miari-tory miandry azy sy mitazona ny sakafony hafana, nefa tsy misy mpihinana akory.
Nahitako fiovana lehibe ny fiarahanay satria isaky ny miray aminy aho dia marary ary tsy mety mahazo aina fa te-hanakipily azy mafy noho ny fanaintainana. Nanjary nitondrako aretina aza izany ka marary lava ny kiboko, manotika aok’izany ary manaintaina ihany koa ny valahako. Rehefa nandroso ny volana dia nanjary niitatra hatrany amin’ny tongotro ny fanaintanana ka rehefa marary ny faritra havanan’ny kiboko dia marary ihany koa ny tongotro havanana, ary mangotsokotsoka ny taolako , tahaka izany ihany koa rehefa ny faritra havia indray no marary. Na teo aza anefa izany olana rehetra izany dia naniry ny hiteraka fanindroany ihany izy ary nitovy hevitra izahay mivady, izaho kosa nino fa mety hanamafy orina ny tokantranonay sy hampiova zavatra izany. Indrisy anefa fa fanaintainana hatrany no iainako rehefa miray ara-nofo izahay. Niova hatramin’ny fandehanan’ny fadimbolako satria tsy nandeha rà be toy ny mahazatra intsony aho fa nanjary tasy kely zara misy naharitra fito ka hatramin’ny valo andro eo hatrany ary miverimberina aza indraindray.
Nisesy ny fahafahan-jaza
Na teo aza izany dia nitondra vohoka ihany aho saingy teo amin’ny fahatelon’ny volana dia afa-jaza aho. Nalahelo ahy ny vadiko tamin’ny voalohany saingy niverina tamin’ny fanaony indray izy. Izaho kosa leo ny fanaintainana sy ny aretina hafahafa azoko isaky ny miray aminy dia lasa nalaina sy nanome lamosina azy matetika. Niteraka ady foana teo aminay mivady anefa izany ka tsy maintsy nilefitra aho ary nitondra vohoka fanintelony indray saingy teo amin’ny faha-enim-bolana dia tsy azo koa ilay zaza. Nikarakara vatana ary aho ka nikaroka ireo fomba rehetra hahazoako zanaka faharoa ary nandany vola be tamin’izany, saingy indrisy fa afa-jaza indray aho taorian’izay ka kivy tanteraka. Lasa nankahala ny vadiko aho satria ninoako tanteraka fa ny ditrany sy ny vehivaviny no nahatonga ny tsy fahasalamako ka izay zaza rehetra ao an-kiboko dia tsy azo avokoa,izaho rahateo tsy mbola nanitsakitsaka azy mihitsy.
Nivaha ihany ny olana, niova izy
Ny anabaviny kosa ilay faravavy kely no hany mba namako sy mahafantatra azy tsara ka nitarainako isan’andro. Efa ela ihany io zaobaviko io no nilaza fa misy tsy mazava ao ambadiky ny tantaran-tokantranoko saingy nandà izany ny saiko. Tamin’izaho afa-jaza farany teo no nilazan’ity zaobaviko ity fa misy vehivavy mpitsabo amin’ny alalan’ny rano sy ny vavaka any. ,malaza ho manampy ireo vehivavy manana olana toa ahy izay afa-jaza lava sy mijaly am-panambadiana ka nampirisihiny aho hanatona azy. Lahatsoratra an-gazety kosa no nahitany ny laharan’ity vehivavy mpitsabo eny 67 ha Atsimo ampitan’ny CECAM ity, dia ny laharana 034 61 328 62 sy ny laharana 032 60 479 94 izay nantsoiko avy hatrany ka teo no ho eo aho dia nahazo fihaonana tamin’i Mme Noellah. Teo no ho eo ihany dia niroso tamin’ny fikarakarana i Mme Noellah ka rano mahagaga sy vavaka no nentiny nandroahana ilay fanahy ratsy niditra tao an-tokantranoko sy nibahana tao an-kiboko tsy hampiteraka ahy. Taorian’io kosa dia niova tanteraka ny vadiko, nanjary nanaja ahy sy nijoro ho raim-pianakaviana mendrika ary tia mivavaka miaraka amiko isaky ny alahady. Efa roa volana kosa izao ny zanakay faharoa , vavikely ilay niriany ary mifankatia fatratra izy mianadahy. Milamina ny tokantranoko ankehitriny ary mandroso sy miroborobo lavitra noho ny teo aloha ny asan’ingahy.